Deotoronomia 30: 1-20
Deotoronomia 29 Deotoronomia 30 Deotoronomia 31
Ary rehefa tonga aminao izany zavatra rehetra izany, dia ny fitahiana sy ny fanozonana izay nataoko teo anoloanao, ary mahatsiaro izany ao am-ponao any amin'ny firenena rehetra izay androahan'i Jehovah Andriamanitrao anao hianao,
dia hampodin'i Jehovah Andriamanitrao avy amin'ny fahababoanao hianao, ary hamindra fo aminao Izy ka hanangona anao indray avy any amin'ny firenena rehetra izay nampielezan'i Jehovah Andriamanitrao anao.
Raha misy aminao voaroaka any amin'ny fara-vodilanitra, dia avy any no hanangonan'i Jehovah Andriamanitrao anao, ary avy any indray no hanalany anao.
Dia hampidirin'i Jehovah Andriamanitrao ao amin'ny tany izay nolovan'ny razanao hianao, ka holovanao izany; ary hanisy soa anao Izy sy hahamaro anao mihoatra noho ny razanao.
Dia hoforan'i Jehovah Andriamanitrao ny fonao sy ny fon'ny taranakao hitiavanao an'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, mba ho velona hianao.
Dia hihaino ny feon'i Jehovah indray hianao ka hanaraka ny didiny rehetra, izay andidiako anao anio.
Ary hataon'i Jehovah Andriamanitrao manana amby ampy hianao amin'izay hahasoa anao, dia amin'ny asan'ny tànanao sy ny ateraky ny kibonao sy ny ateraky ny biby fiompinao ary ny vokatry ny taninao; fa ho faly aminao indray Jehovah ka hahasoa anao, araka izay nahafaliany tamin'ny razanao,
raha mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitrao hianao, hitandremanao ny didiny sy ny lalàny, izay voasoratra amin'ity bokin'ny lalàna ity, ka miverina amin'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra.
tamin'ny nandidiako anao andro-any ho tia an'i Jehovah Andriamanitrao ka handeha amin'ny làlany ary hitandrina ny didiny sy ny lalàny ary ny fitsipiny, mba ho velona hianao ka hihamaro, ary mba hitahian'i Jehovah Andriamanitrao anao any amin'ny tany izay efa hidiranao holovana.
Fa raha mivily kosa ny fonao, ka tsy mihaino hianao, fa voataona hiankohoka eo anatrehan'izay andriamani-kafa sy hanompo azy,
dia lazaiko aminareo anio fa ho ringana tokoa hianareo, ary tsy ho maro andro eo amin'ny tany izay efa hidiranao holovana, rehefa tafita an'i Jordana hianareo.
Miantso ny lanitra sy ny tany aho anio ho vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana; koa mifidiana ny fiainana, mba ho velona hianao sy ny taranakao,
dia ny ho tia an'i Jehovah Andriamanitrao hianao ka hihaino ny feony sy hifikitra aminy; fa izany[Na: izy.] no fiainanao sy fahamaroan'ny andronao, mba honenanao eo amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'i Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao, homena azy.